Misa ukwakhiwa kwesoftware yeCrappy-Isoftware eDityanisiweyo isaphumelela | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 25, 2012 NgoLwesibini, Septemba 25, 2012 UChris Lucas
Nantsi into ye-CIO yangaphakathi kunye namaqela akho obuchwephesha angaphakathi angafuni ukuba uyazi, ukuphunyezwa kwesoftware yeenyanga ezili-18 ekubiza nje i- $ 500K- $ 1MM kunokwenziwa isihogo esinexabiso eliphantsi… kwaye kufanele ukuba kunjalo. Bakha ukhuseleko lomsebenzi kuba uninzi lweenkokheli ze-C kunye nabathengisi abayiqondi indlela itekhnoloji enokuthi isebenze ngayo.
Njengabathengisi sonke sifuna isoftware elingana nenyathi. Lowo uyenzayo isizukulwana esikhokelayo, umxholo wokuqulatha, amanqaku akhokelayo, ukulungiswa kokuguqula… oh, ewe, kwaye une kubahlalutyi umaleko ngaphezulu kwayo. Kwaye, njengabathengisi kunye neetekhnoloji, sifuna ukuya kwakha isoftware kuba siqinisekile ukuba asizukufumana into esiyifunayo. Inyani, nangona kunjalo, kukuba sinokufumana kufutshane ne-90% yento esiyifunayo ukuba siyeke ukukhangela i-unicorn kwixabiso eliphezulu, kumaxabiso "kwizisombululo" kwaye siqale ukujonga ii -apps ezidityanisiweyo zewebhu kwiqhezu leendleko.
Ke kuya kufuneka ujonge ntoni xa uphumeza ii -apps ezihlanganisiweyo zewebhu? Nazi izinto ezi-3 eziphezulu omele uzijonge:
1) Hlanganisa ngokukhululekileyo
Nokuba ujonge ababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile, isoftware yobalo, okanye nantoni na ephakathi, kuya kufuneka ujonge inkonzo edibanisa ngokukhululekileyo. Ngoba? Kuba oko kuthetha ukuba inkonzo iyakuvumela ukuba usebenzise idatha yakho ngendlela ofuna ngayo. Imfihlelo yokusebenzisa nayiphi na inkonzo kukuqonda ukuba umgaqo-siseko omnye-idatha yeyakho, hayi inkonzo. Inkampani efuna ukudibanisa kunye neenkonzo ezininzi iyakuqonda oku kwaye ke yenza ukuba kube lula ukusebenzisa inkonzo yabo.
2) Vula i-API
Nokuba awungomphuhlisi kwaye awukaze uve ngokuvulwa API Kuya kufuneka ujonge iinkonzo ezinee-API ezivulekileyo. Isizathu silula, ii-API zivumela nabani na ukuba akhe iinkonzo kunye neemveliso ngaphezulu kweapp yabo. Kutheni kubalulekile nje oku? Isizathu esinye esikhulu kukuba ivumela ukusetyenziswa kobuchule besicelo esingundoqo. Nabani na onokuza kwaye akhe inkonzo eluncedo enokuvala umngxunya okanye ikunike ithuba elongezelelekileyo. Esinye esona sizathu siphambili kukuba ungakha ngaphezulu kwayo. Uyayikhumbula i-unicorn endithethe ngayo ngaphambili? Ukuba wena okanye isixhobo sonjiniyela sinazo iichops zobuchwephesha, ungakha ngaphezulu kweapp, okanye usebenzise idatha ngendlela ofuna ngayo. Ii-API ezivulekileyo zinika umphuhlisi isakhelo sokusebenza kwaye ayenzi ukuba ubenakho ukwakha okanye ukwakha inkonzo.
3) Uluntu olusebenzayo
Enye yezona zinto zinomtsalane endizibonileyo zisebenza kolu shishino yindlela iinkampani / iiapps ezamkela ngayo uluvo lokudityaniswa zinesiseko somsebenzisi esisempilweni, esisebenzayo nesisebenzayo. Ewe ezinye zisebenza ngakumbi kunezinye, kodwa uninzi lweenkampani ezamkela umbono wokudityaniswa zinesiseko somsebenzisi esifuna ukudityaniswa. Kutheni le nto kubalulekile ukuba ufumane iiapps ezinala vibe yoluntu? Kungenxa yokuba uninzi lweeapps ezinala mahlelo kwiapps yazo, zimamele ingxelo yabathengi, kwaye ngokubanzi zinenkuthazo yokuqhubeka nokukhulisa isiseko somsebenzisi. Zininzi ii -apps ezimileyo ziyayeka ukuphindaphinda okanye ukuphinda-phinda kanye okanye kabini ngonyaka. Ufuna ukufumana iiapps ezihlala ziphucula kwaye zikhupha ukudityaniswa okutsha, ngaloo ndlela zikuvulela amathuba amaninzi.
Ayizizo kuphela izinto onokuzikhangela kodwa kumava am zixelela kakhulu imiqondiso yeapp elungileyo. Ii -apps ezidityanisiweyo zinokukunceda ukongela ixesha, imali kunye neentloko. Ukujonga ukwakha i-unicorn ngumyalezo wobudenge, ngakumbi xa unokufumana ii -apps ezimbalwa ezihlanganisiweyo ezisombulula uninzi lweemfuno zakho.
Sazise ukuba zeziphi ezinye ii -apps zakho ozithandayo ezidityanisiweyo ezingezantsi.
Sep 25, 2012 ngo-9:16 PM
Ndihlala ndimangaliswe kukucaphula kunye namaxesha apho abathengi bethu ngamanye amaxesha banikwa ngamaqela abo e-IT kwiiprojekthi ezithile. Ubungenakutsho ngcono… ethembekileyo, ekhuselekileyo kwaye eyomeleleyo isoftware kulula kunangaphambili ukuyiphuhlisa.